Sun, May 27, 2018 | 23:27:34 NST
राप्रपा नेपालबाट तीन कलाकार उमेद्वार
काठमाडौ, असोज ११ – आउँदो संविधान सभाको चुनाबमा राप्रपा नेपालबाट ३ जना कलाकारले प्रत्यक्षतर्फ चुनाब लड्ने भएका छन् । गायिका मिरा राणा, पप गायक सञ्जय श्रेष्ठ र चलचित्र निर्देशक उद्धब पौडेल काठमाडौबाट चुनाब लड्न लागेका हुन् ।
हरिबंशलाई नेपालगञ्जमा सार्वजनिक सम्मान
नेपालगन्ज, असोज ११ – कलाकार हरिबंश आचार्यलाई नेपालगञ्जमा सार्वजनिक सम्मान गरिएको छ । बुक प्लानेट नेपालगन्जको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बाँकेका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले आचार्यलाई सार्वजनिक सम्मान गरेका हुन् ।
लैनसिंह बाङ्देलको सालिक पसलमा अलपत्र
खोटाङ, असोज ११ – स्थापनामा चासो नदिइँदा खोटाङमा लैनसिंह बाङ्देलको सालिक अलपत्र बनेको छ । जिल्लाको सार्वजनिक स्थलमा राख्नेगरी तीन वर्षअघि मोरङ बेलबारीका मुर्तीकार श्याम गौतमले बनाएको बाङ्देलको सालिक स्थापना नहुँदा अलपत्र परेको हो ।
साना हातबाट आकर्षक चित्र (फोटो फिचर)
काठमाडौ, असोज १० – बालबालिकामा सृजनात्मक क्षमता अरुको भन्दा तीक्ष्ण हुन्छ भन्ने कुरालाई काठमाडौमा भएको एउटा चित्रकला प्रदर्शनीले पनि पुष्टी गरेको छ ।
राजालाई नेपाल चिनाउने विदेशी (फोटो फिचर)
काठमाडौ, असोज १० – सुनसान पाटन संग्रहालय । काठका बुट्टेदार ढोका छिचोल्दै दुईतला माथि पुगेपछि ६ दशक पुराना फोटोको प्रदर्शनी । नेपालका अति बिकट तर प्राकृतिक रुपले निक्कै लोभ लाग्दा पुराना फोटाले धेरैको मन तान्छ ।
माओवादीको चुनावी गीतमा नाच्न राजेश हमाल मानेनन्
काठमाडौ, असोज १०– संविधानसभा चुनावको प्रचारको लागि एकीकृत नेकपा माओवादीले तयार पारेको गीतमा अभिनय गर्न कलाकार राजेश हमालले अस्वीकार गरेका छ ।
समा नयाँ फेसनमा
काठमाडौं, असोज १० – फेसन डिजाइनर समा बानु आफ्नो एकल फेसन सो लिएर फेरि फेसनका पारखीमाझ आउँदै हुनुहुन्छ । छोटो समयमा निकै लोभलाग्दा फेसन डिजाइन गर्दै लोकप्रिय बन्दै गएकी समाको नयाँ फेसन शो शुक्रबार बेलुका होटल याक एण्ड यतिको रेगल हलमा सुरु हुदैछ ।
भुवन एमालेमै, टिकट पाउने भएपछि रोकियो राप्रपा नेपाल यात्रा
काठमाडौं, असोज १० – एमालेले टिकट नदिने भएपछि राप्रपा नेपालमा प्रवेश गर्न लागेका कलाकार भुवन केसीको पाइला रोकिएको छ । केसीलाई एमालेले प्रत्यक्षबाटै उम्मेद्वार बनाउने तयारी गरेको छ ।
अन्तिम समयमा भुवन केसीको पार्टी प्रवेश रोकियो
काठमाडौ, असोज ९ – राप्रपा नेपाल प्रवेशको तयारी गरेका नायक भुवन केसीको पार्टी प्रवेश अन्तिम समयमा रोकिएको छ । केसी अन्तिम समयमा स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित नभएका राप्रपा नेपालका प्रचार संयोजक मोहन श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
भुवन केसी भन्छन् ‘मैले टिकट नपाए एमालेलाई नै घाटा’
काठमाडौ, असोज ८ – एकीकृत नेकपा माओवादीमा प्रवेश गरेकी नायिका रेखा थापा पर्साबाट चुनाव लड्ने पक्का भएपनि एमाले प्रवेश गरेका नायक भुवन केसी भने जिल्लिएका छन् ।
निर्देशक शिव रेग्मीलाई बिदेशबाट ८० हजार सहयोग
अर्जुनकुमार संग्रौला/उज्यालो । काठमाडौं, असोज ८ - दुवै मृगौलाले काम गर्न छाडेपछि ओछ्यानमा थलिएका चलचित्र निर्देशक शिव रेग्मीलाई बेल्जियमबाट ८० हजार रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ ।
९५ टेकेका राष्ट्रकविले भन्नुभयो ‘म त अझै तन्नेरी’
काठमाडौं, असोज ८ – ९० को त कुरै छाडौं, ६० वर्ष पुगेपछि नै धेरै मान्छेको जाँगर हराउँछ । स्वास्थ्यले त्यति काम गर्दैन । कोही ओछ्यानमा थला पर्छन्, कोही अरुको सहारामा लर्‍याङतर्‍याङ गरेर दिन कटाउँछन् ।
विद्यार्थीले बनाएको चित्रकला प्रदर्शनी
काठमाडौ, असोज ७ – दोस्रो एनएमबी बैङ्क अन्तर विद्यालय हेरिटेज पेन्टिङ प्रतियोगितामा सहभागी चित्रकलाको सोमबारदेखि प्रदर्शनी गरिएको छ । अरनिको ग्यालरी र नेपाल एकेडेमी अफ फाइन आर्टसमा १० गतेसम्म चित्रकला प्रदर्शनी गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
यसवर्षको मदन पुरस्कार दमिनी भीरलाई
काठमाडौ, असोज ५ – यसवर्षको मदन पुरस्कार राजन मुकारुङको उपन्यास दमिनी भीरले पाएको छ । शनिबार बसेको मदन पुरस्कार गुठीको बैठकले कृतिको छनोट गरेको सदस्य कुन्द दीक्षितले जानकारी दिनुभयो ।
कथा : लिभिङ् टुगेदर
श्रीधर पौडेल - “अनावश्यक नाटक धेरै, रुने मान्छेले म रुँदै छु भनेर सुनाउँदैन ।” दुई दिनदेखि आँखा नओभाएपछि उसले ठूलो हिम्मत गरेर राति १२ बजे फोन गरेको थियो, मोवाईल त उठ्यो तर हिक्क हिक्कले, बोल्नै सकेन । केही बेरमा मोवाईलमा आएको यस्तो म्यासेजले उसको मन थामिएन ।
चट्याङ्गबाट बच्नको लागि गरिने दुर्लभ जात्रा
सिल्भिया राजोपाध्याय/उज्यालो । काठमाडौं, असोज ४ - विदेशी विद्धान डब्लु क्रिकपाट्रिकले आफ्नो कितावमा ललितपूरमा घर भन्दा बढी मन्दिर छन् भनेर उल्लेख गरेका छन् ।
काठमाडौंमा इन्द्रजात्रा (फोटोफिचर)
काठमाडौं, असोज २ - वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको पूजा–आराधना गरी परम्परागत इन्द्रजात्रा पर्व मनाईएको छ । काठमाडौंको बसन्तपुरमा इन्द्रजात्रा अवलोकन गर्न राष्ट्रपतिसहित उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी र सर्वसाधारणको ठूलो उपस्थिती थियो ।
वैद्यको लहलहैमा गजुरेल मुडुल्लै !
काठमाडौ, असोज २ – हाँस्य व्यंग्य कलाकार मनोज गजुरेल क्यारिकेचर गर्दा तालुको बखान पनि खुबै गर्छन् । आफ्नो टाउकोमा पनि कपाल गन्न नै मिल्नेगरी घट्न थालेपछि उनले तालुलाई पनि हाँसीमजाकको विषय बनाउन थालेका हुन् ।
दीपक र दीपाले सँगै लिए मापसे कक्षा
काठमाडौं, असोज २ – प्रहरीले आफूलाई झुक्याएको दावी गर्दै आएका कलाकार दीपकराज गिरीले अन्तत मापसे कक्षा लिएरै लाइसेन्स फिर्ता लिएका छन् । उनले सच्चा नागरिकको कर्तब्य पालना गरी कक्षा लिएरै लाइसेन्स फिर्ता लिएको बताएका छन् ।
‘सुनगाभा’ देशैभरि देखाइने
काठमाडौ, असोज २ – समलिंगी तेश्रोलिंगीको विषय समेटिएको नेपाली चलचित्र सुनगाभा देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरिने भएको छ । सुनगाभाको प्रदर्शनबाट समलिंगी तेश्रोलिंगीका समस्या बुझ्न सजिलो हुने अधिकारकर्मी सुनिलबाबु पन्तले बताउनुभयो ।
माओवादीसँग भारतको छद्म सम्बन्ध
सुधीर शर्मा – सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भारत र नेपालमा तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष नेकपा माओवादीको संबन्ध कस्तो थियो ? कान्तिपुरका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्माको नयाँ पुस्तक ‘प्रयोगशाला: नेपाली सङ्क्रमणमा दिल्ली, दरबार र माओवादी’ मा चर्चा गरिएको छ । असोज ६ गतेदेखि बजारमा आउने यो पुस्तकको एक अंश:
भदौ ३१ – हृदयघात भएपछि बलिउडका चर्चित अभिनेता दिलिप कुमारलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ । ९० वर्षिय दिलिप कुमारलाई हृदयघात भएपछि अस्पतालमा भर्ना गरिएको पारिवारिक स्रोतलाई उधृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
मापसेका नाममा प्रहरीले मलाई झुक्यायो : दीपकराज गिरी (विज्ञप्तीसहित)
काठमाडौं, भदौ ३१ – हाँस्य कलाकार दीपकराज गिरीले मादक पदार्थ सेवन गरेको नाममा आफूलाई झुक्याएको दावी गरेका छन् । उनले प्रहरीले निशुल्क आफ्नो श्रम लिएर उल्टै आफ्नो बदनाम गराएको समेत बताएका छन् ।
‘फलानो’सँग कार्टुन कहानी
लक्ष्मण कार्की/उज्यालो । राजेश केसी, चर्चित व्यंग्य चित्रकार अर्थात कार्टुनिष्ट । नागरिक दैनिकमा फलानो शीर्षकमार्फत केसीले राजनीतिक तथा सामाजिक विषयवस्तुमा कार्टुन बनाउँदै आउनुभएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फोटो प्रतियोगिता सुरु
काठमाडौं, भदौ २८ - नेपालको सम्पदालाई विश्वभर चिनाउने उद्देश्यले राजधानीमा अन्तर्राष्ट्रिय फोटो प्रतियोगिता सुरु भएको छ । गत भदौ १६ गतेबाट सुरु भएको प्रतियोगिता आगामी असोज १ गतेसम्म चल्नेछ ।
सारंगीले उचालिएका तीर्थ आफैं परे जालैमा...
मिलन तिमिल्सिना/उज्यालो । काठमाडौं, भदौ २८ – शुक्रबार विहान उज्यालो हुन अझै अढाईघण्टा जति बाँकी नै थियो । मस्त सुतिरहनुभएका कलाकार बमबहादुर कार्कीको मोवाईलमा घण्टी बज्यो ।
काठमाडौं, भदौ २८ – वरिष्ठ लोकगायक तीर्थबहादुर गन्धर्वको ६० वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । विहीबार राती दुईबजे सैनिक अस्पताल छाउनी काठमाडौंमा उहाँको निधन भएको कलाकार बमबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
एक खुट्टाले छमछमी
सन्तोष न्यौपाने/उज्यालो । बेल्जियम, भदौ २६ - के तपाइँ एउटा खुट्टा टेकेर छमछमी नाच्न सक्नुहुन्छ ? सक्छु भनेर एक दुईफेर खुट्टा खोच्चाएपनि तपाईंलाई नाच्न त पक्कै हम्मे पर्छ । तर हाम्रै देशमा यस्ता मान्छे पनि छन्, जो एक खुट्टा टेकेर मज्जाले नाच्न सक्छन् ।
सोझा सुशीलले फेरि ‘आगो’ लगाउने
काठमाडौं, भदौ २६ – नेपाली फिल्म इन्डष्ट्रीमा सुशील क्षेत्री सोझा नायक भनेर चिनिन्छन् । थोरै बोल्ने र सबैसँग मिल्ने उनको बानीका कारण इन्डष्ट्री भित्रका धेरैले उनलाई मन पराउँछन् ।
महिनावारी लुकाउँदा समस्यामा परें : करिष्मा
पी.टी.लोप्चन, रुपा गौतम/उज्यालो । काठमाडौ, भदौ २५ – २५ बर्षअघिको कुरा । आफ्नो पहिलो चलचित्र सन्तानको सुटिङको क्रममा महिनावारी भएकी नायिका करिष्मा मानन्धरले यो कुरा कसैलाई भन्नुभएन ।
आर्यन र नम्रता फेरि सँगै
काठमाडौ, भदौ २५ – नायक आर्यन सिग्देल अब चलचित्र निर्माण गर्ने तयारीमा छन् । चलचित्रको बजार राम्रो नभइरहेको बेलामा उनले निर्माता सुवास गिरीसँग मिलेर ‘नोभेम्बर रेन’ नामको चलचित्र बनाउन लागेका छन् ।
मर्न बरु गाह्रो हुन्न..... फूलमालाले छोपिएका फत्तेमान (फोटो फिचर)
सूर्यकुमार क्षेत्री/उज्यालो । काठमाडौं, भदौ २५ - ‘रातो र चन्द्रसूर्य जंगी निशाना हाम्रो ..’ गीत बजिरहेको छ । फत्तेमानसँग त्यतिबेला यही गीत गाएका अम्बर गुरुङ्ग आँखा मिच्दै हुनुहुन्थ्यो ।
सविन मिश्र/उज्यालो । काठमाडौं, भदौ २५ – १९९३ साल मंसिर १३ गते काठमाडौंको पशुपति नजिक देवपतनमा जन्मिएका फत्तेमान राजभण्डारीको बुबा जीतमान तबलाबादक हुनुहुन्थ्यो ।
वरिष्ठ गायक फत्तेमान राजभण्डारीको निधन
काठमाडौं, भदौ २५ – वरिष्ठ गायक तथा संगीतकार फत्तेमान राजभण्डारीको ७७ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । सोमबार राती १२ बजेर ५० मिनेट जाँदा काठमाडौंको ओम नर्सिङ होममा उपचारका क्रममा उहाँको निधन भएको हो ।
छविको नयाँ फिल्ममा दोहिरिए आर्यन
अर्जुनकुमार संग्रौला/उज्यालो । काठमाडौं, भदौ २४ - आफ्नै प्रोडक्सन कम्पनी दर्ता गरेर धमाधम चलचित्र निर्माण गरिरहेका निर्माता छविराज ओझाले फेरि नयाँ चलचित्र निर्माणको घोषणा गरेका छन् । चलचित्रको नाम ‘लज्जा’ राखिएको छ ।
बुद्धको अभिनय गरेका भारतीय कलाकारले मागे माफी
भदौ, २३ – गौतम बुद्ध भारतमै जन्मिएका हुन् भन्दै भारतीय टेलिभिजन च्यानल जी टीभीले टेलिश्रृंखला निर्माण गरेपछि यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
बुद्ध भारतमा जन्मिएका भन्दै जी टिभीले बनायो टेलिश्रृखला
काठमाडौं, भदौ २३ - गौतम वुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन् भन्दै भारतीय टेलिभिजन च्यानल जी टिभीले टेलिश्रृखला वुद्ध निर्माण गरेको छ । भगवान गौतम वुद्धको जीवनमा आधारित यो टेलिश्रृखला आइतबारदेखि प्रसारणमा आउँदै छ ।
समाजसेवी महिलालाई दिपाश्रीको तिज सम्मान
अर्जुनकुमार संग्रौला/उज्यालो । काठमाडौं, भदौ २२ - महिला सम्मानको अवसरको रुपमा तिजलाई लिनुपर्ने मान्यता सहित हाँस्यकलाकार दिपाश्री निरौलाले तिज बिषेश कार्यक्रम गरेकी छिन् ।
उपन्यास अंश : द्रौपदीमा नारीको आक्रोश
राजेन्द्र थापाको नयाँ उपन्यास द्रौपदीमा घरेलु हिंसा र बलात्कारबाट पीडित महिलाको कथा र वेदना समेटिएको छ । अलग अलग ठाउँमा घटेका सत्य घटनालाई आधार बनाएर लेखिएको द्रौपदी उपन्यासमा उल्लेख केही पंक्ति यस्ता छन्:
फालिएको सामानमा सजिए युवती (फोटो फिचर)
काठमाडौ, भदौ २२ – मोवाइलमा रिचार्ज गरेपछि कार्ड काम लाग्दैन । त्यसैले प्रायः सबैले कार्डलाई त्यसै मिल्काउँछन् । प्लाष्टिक, बोत्तल, पत्रपत्रिका, थोत्रो बोरा पनि त्यसै मिल्किरहेको हुन्छ ।